News - Okwu Mmalite nke Iji Polyacrylamide
Ekwentị: 86-510-87976997 / 0086 13861515998
Yixing mmiri mmiri Chemicals Co., Ltd.
Okwu Mmalite nke Iji Polyacrylamide
Okwu Mmalite Nke Anyịe Nke Polyacrylamide
Anyị amatalarị ọrụ na mmetụta nke ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ mmiri n'ụzọ zuru ezu. Enwere ọtụtụ ọkwa dị iche iche dịka ọrụ ha na ụdị ha. Polyacrylamide bụ otu n'ime polymer polymer linear, na ngwongwo ya nwere ọtụtụ ọnụọgụ. Ọ nwere ike ịmịkọrọ ihe ndị siri ike kwụsịtụrụ na mmiri, mmiri ion ma ọ bụ mkpokọta ngwakọta n'ime nnukwu flocs site na nkwụnye ụgwọ, mee ka sedimentation nke ihe a kwụsịtụrụ, mee ka nkọwa nke ihe ngwọta ahụ dị ngwa, ma melite nsonaazụ nzacha. The zuru ezu ojiji nke ya ga-ẹkenam dị ka n'okpuru n'ihi na ị.
1. Jiri na sludge dewatering
Mgbe eji maka sludge dewatering, cationic polyacrylamide nwere ike họrọ dị ka sludge, nke nwere ike n'ụzọ dị irè mmiri mmiri sludge tupu sludge abatakwa nyo pịa. Mgbe dewatering, ọ na-emepụta nnukwu flocs, ọ dịghị arapara na nyo ákwà, na anaghị agbasa n'oge nyo pịa. Achịcha apịtị dị oke oke na arụmọrụ akpịrị ịkpọ nkụ dị elu.
2. Jiri na ọgwụgwọ mmiri ahihia nke ahihia
Mgbe e ji ya mee ihe n'ịgwọ nsị ụlọ na mmiri mmiri na-adịghị ọcha, dị ka nri na mmiri na-aba n'anya, mmiri mmiri si na mmiri ọgwụ mmiri nsị, mmiri mmiri biya, MSG ụlọ ọrụ mkpofu mmiri, mmiri mmiri shuga, nri mmiri mmiri, wdg. anionic, nonionic na inorganic salts ọtụtụ ugboro ma ọ bụ ọtụtụ iri ugboro karịa, n'ihi na ụdị a n'efu mmiri bụ n'ozuzu na-adịghị mma ụgwọ.
3. acha ọcha mmiri si n’osimiri na n’ọdọ mmiri
Enwere ike iji Polyacrylamide mee ihe maka ọgwụgwọ mmiri pọmpụ na mmiri mmiri dị ka isi iyi mmiri. N'ihi ntakịrị usoro onunu ogwu ya, mmetụta dị mma na ọnụ ala, ọkachasị mgbe ejiri ya na flocculants inorganic, ya mere a ga-eji ya na osisi mmiri dị ka flocculant site na Osimiri Yangtze, Yellow River na efere ndị ọzọ.
Ihe a dị n'elu bụ nkọwa zuru ezu nke polyacrylamide. Dị ka onye na-agwọ mmiri, ọ nwere arụmọrụ karịa na nsị mmiri. Otú ọ dị, na mgbakwunye na ojiji ndị dị mkpa ya na akụkụ atọ ahụ dị n'elu, enwere ike iji ya dị ka onye na-agba ume na ihe mgbakwunye ndị ọzọ na mpempe akwụkwọ iji mee ka ọnụ ọgụgụ njigide nke fillers na pigments dịkwuo elu, ma nwekwuo ike akwụkwọ; dị ka oilfield nwekwara, dị ka ụrọ mgbochi ọzịza Ọ bụ a ndim gị n'ụlọnga maka oilfield acidification; ọ nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ na akwa akwa akwa akwa, arụmọrụ dị ike, obere ịbelata, ọnụọgụ dị ala nke akwa, yana akwa akwa dị larịị.